स्वर सम्राट नारायणगोपाललाई काठमाण्डौका श्रष्टाले यसरी सम्झिए ( भिडियो सहित) « Light Nepal
स्वर सम्राट नारायणगोपाललाई काठमाण्डौका श्रष्टाले यसरी सम्झिए ( भिडियो सहित)
काठमाडौँ, १९ मंसिर । स्वर सम्राट नारायणगोपाल गुरुवाचार्यको २७ औँ स्मृति दिवसको उपलक्षमा नारायण गोपाल संगीत कोषले यहाँ आज सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो ।
विसं १९९६ असोज १८ मा काठमाडौँको किलागलमा जन्मनुभएका नारायणगोपाल गुरुवाचार्यको विसं २०४७ मंसिर १९ मा निधन भएको थियो ।
झण्डै ५०० भन्दाबढी गीत गाउनुभएकामा नारायणगोपालले आफ्नो जीवनकालमा कूल १३७ लोकगीत, पापगीत तथा आधुनिक गीतमामा संगीत दिइ रेकर्ड गराउनुभएको थियो ।
गुरु माणिकरत्न स्थापित र गायक प्रेमध्वज प्रधानको संयुक्त कम्पोजमा रहेको गीत नै नारायणगोपालको पहिलो गीत थियो । नेपाली फिल्मका लागि पनि थुप्रै गीत गाउनुभएका उहाँ २०औँ शताब्दीका एक प्रभावशाली गीतकार थिए । काठमाडौँको किलागलमा नेवार समुदायमा जन्मनुभएका नारायणगोपाल गुरुवाचार्य राष्ट्रिय नाचघरको प्रबन्धक तथा सांस्कृतिक संस्थानको प्रबन्ध निर्देशक पनि हुनुभयो ।
गायक प्रेमध्वज प्रधानले स्व नारायण गोपाललाई स्वर परीक्षाका लागि रेडियो नेपाल लगेका थिए । उक्त परीक्षाका लागि डा राममान तृषितले लेख्नुभएको ‘पक्षीको पंखामा धर्तिको दियो’ गीतमा स्वर परीक्षा दिनुभएको थियो । यो पहिलो स्वर परीक्षामा नै उहाँ उत्तीर्ण हुनुभयो । त्रिचन्द्र कलेजको ४०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा गीत संगीत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सो कार्यक्रममा उहाँले तबलावादकको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । ‘विछोडको पीडा’ र ‘ए कान्छा ठट्टैमा यो बैंश जान लाग्यो’ जस्ता असंख्य जनप्रिय गीतले उहाँलाई लोकप्रियताको शिखरमा पु¥यायो ।
उहाँको गीत तथा संगीत विशेष गरेर प्रेम, जीवन तथा देशभक्तिमा अशक्त थियो । ‘जागजाग चम्क हे नौजवान हो’, ‘आमा तिमीलाई जलभरिका औँलाले चुम्न’ जस्ता गीत संगीतले ६० का दशकमा गायक तथा संगीतकार गोपाल योञ्जनसँग मिलेर काम गरेपछि उहाँले प्रेम, वेदनायुक्त गीत सिर्जनामा तल्लीन हुनुभयो ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले वरिष्ठ संगीतकार एवं गायक सिके रसाइलीलाई नारायण गोपाल स्मृति सम्मानबाट सम्मान गर्नुभयो । सो सम्मानको राशि रु २५ हजार नगद तथा सम्मानपत्र रहेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले नारायणगोपालका कालजायी गीत जति सुने पनि नपुग्ने बताउँदै गीत संगीत व्यक्तिको जीवनमा अभिन्न अंगका रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले नारायणगोपाल आफ्नै सुरतालमा रम्ने स्वाभिमानी व्यक्तित्व भएको स्मरण गर्नुभयो ।
सम्मान ग्रहण गर्दै वरिष्ठ संगीतकार रसाइलीले नेपालको गीत संगीत क्षेत्रको विकासमा नारायणगोपालले पु¥याउनुभएको योगदान अविष्मरणीय भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गीतकार कञ्चन पुडाशैनी, कलाकार निशा देसार तथा अजर जंगमलगायत नयाँ तथा पुराना गायक गायिकाले गीत संगीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
नाजिरको ५ गोप्य प्रश्न Samragyee लाई…(हेर्नुहोस् भिडियो)
बाबुराम भट्टराईले दिए छोरी मानुषीलाई नयाँ शक्तिको काठमाडौं जिल्ला संयोजकको जिम्मेवारी
सेनाले सरस्वती मन्दिर बनायो
कहिलेसम्मका लागि थपियो नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको मिति ?
सीप सिक्दै, व्यवसाय सम्हाल्दै
यी हुन् दाँतको दुखाइबाट जोगिने ५ उपाय
होचो हुनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक !
आफ्नो गल्ती स्वीकार्दै फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले गरे यस्तो प्रतिबद्धता
महिला हिंसा अन्त्यमा ध्यान दिन आग्रह प्रतिवेदन
एसइई परीक्षा : सिरहामा दुई केन्द्राध्यक्ष र एक निरीक्षक निष्कासित